Short Story_Takapotsa Tabatwa neMapurisa Tichisvirana muMota!!! - Vanoda Zvinhu
Short Story_Takapotsa Tabatwa neMapurisa Tichisvirana muMota!!!
Kukwirwa kwandakaitwa na tezvara
Yedu yekuda kutsvaga mari iyi, ndaishanda ku Joburg ndiri taxi driver saka ndaipota ndichitakura vanhu manheru kusvika makuseni chaiwo. Rimwe zuva ndainge ndakaneta hangu saka told myself kuti nhasi ndirikuda kumbofara saka ndakabva ndaenda pa NewsCafe yepa Midrand, ndakanwa ndichiterera hangu music.
Ndakagara hangu ndichinwa doro rangu ndakaona mumwe musikana wandaiziva ainzi Bridget saka ndainge ndakambomutakura mumwe musi saka aiziva kuti ndine mota, ainge akagara nevamwe vasikana two inini ndichibva ndaramba hangu ndichizvinwira since ndaida hangu kufara ndega. Bridget uya akasimuka painge akagara ndokubva awuya kwandiri, she greeted me achisekerera and I just smiled back ndikati I see urikunakidzwa. Takataura for while ndipo paakati unogona here kutiendesawo kumba here neshamwari dzangu vanogara around kumba kwangu but tirikuda kutanga taenda ku Busy Corner before taenda kumba but only if you promise to wait for us. Ndainge ndisina problem nazvo since ndaiziva kuti doro ndinenge ndakutengerwa apa ndichifara nekubhadharwa as well, saka ndakakurumidza kuti that’s fine as well as you are going to pay me.
Bridget akadzokera kushamwari dzake ndikaona vanhu vese vasimuka vachiuya tichibva tabuda apa vanhu vainge vadhakwa already ndikatoshaya kuti sei varikuda kuramba vachitsvaga beer asi hey yainge iri mari yavo. Hameno chiclub chandakaendeswa chainge chiri muTembisa but chaitofaya and painge pakazara since tisina kuzomira paBusy corner. Vasikana vaita noise muroad vachiimba kusong yese yandairidza mumota but chandaiziva ndechekuti mari yangu ichauya yakakwana saka ndainge ndisina problem nenoise yavo.
Patakasvika paya vakaburuka vachibva vatanga kutamba vachizunza mupunduru kusong yandairidza vasati vapinda mukati meclub. Hatina kumbogara for long vasikana vachibva vati vakuda kunorara tichibva tadzokera mumota Bridget achibva atanga kuti ndikise mumwe musikana good night ndichibva ndati why should I do that, musikana uya achibva apindira achiti what if kana achida kukisa iwewe. Takazongoti bye bye ndokupedzisira naBridget. Ndakasvika pagate paBridget achibva ati she wanted kupinda mumba awone kuti cousin yake ichiri yakamuka here since ainge asina makey, cousin yake ainge abuda akanoka achiita noise zvekuti manext door vanenge vakatomuka.
Akadzoka tichibva tafonera cousin yake ichibva yati she will be back in 10mins, Bridget ainge adhakwa ndokubva atanga kuti can you kiss me good night. Handina kuona problem ndikabva ndamukisa soft iye achibva andipa french chaiyo eish iwe ndakanzwa maLips achiita kakuvava door nefodya asi ndaigoitawo sei. Ndakatanga kumukisa kudaro achibva atora ruoko rwangu ndokutanga kundibatisa beche rake apa rainge ratota kare, akabva ati you see kuti ndatota sei ndirikuda kusvirwa right now.
Ndakaita kakumbomira ndichifunga kuti ndainge ndisina macondom and munhu uyu ndainge ndisingazive kuti akamira sei but ndaitomunonokera akabva abuditsa mboro yangu ndokuiti muromo make haaa apa ndakabva ndapera simba coz kudyiwa mboro ndiyo weakness yangu zvekuti ndinenge ndakutopengereka. Ndakadyiwa mboro mumota imomo apa ainge ane katongue ring apa kaitambiswa pamusoro wemboro ndichibva ndaita kurasika brain chaidzo zvekuti handitozive kuti chii chakazoitika kubva ipapo , ndakatozovhunduka ndaona malights eblue aya epolice ndichibva ndagara hangu kunge munhu aida kudriver asi mboro yainge yatomira half ichiratidza kuti ndainge ndatomboinyika mubeche raBridget.
Iye ainge akadhakwa saka there was no need to ask her but ndakabva ndazviti since ndamboisa nyoro I might as well pedzisa kuti nditunde. Ndakararisa car seat kusvika pasi uchibva waita sebed Bridget achibva awuya pamusoro ndokutanga kukoira so haaa handidi kunyepa mwana aigona chikapa iyeye , ndakabva ndatunda zvekuita kumukanda mudenga akatomborovera paroof yemota. Takabva taona mapurisa again achibva aburuka chop chop vasati vasvika ndipo pakasvika mota yepolice ichimira paside pedu tikafunga kuti nhasi tichasungwa asi cousin yake ndiyo yakabva yaburuka mumota yepolice, apa bvudzi rainge rakaita kutsindirika pagotsi kuratidza kuti aitobva kunosvirwa nemupurisa uya. Ndakazongobva paye ko mari yetaxi ndakaizopihwa here ipapo, Bridget akabva ati I just paid you nebeche what more do you want eish ndakabva ndaziva kuti you should not mix business and pleasure….